युनिभर्सिटीको योजना सहित टेक्सास अगाडी बढी रहेको छः भाइस प्रिन्सिपल श्रेष्ठ (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ कार्त्तिक ९ गते १२:११ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । कक्षा १२ को नतिजा आएसंगै यत्ति बेला ब्याचलरका लागि विद्यार्थीहरु कुन कलेज पढ्ने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा रहेर केटिएम खबरले कलेजका विषयमा विशेष सहभागिता मुलक कार्यक्रम तथा विशेष सम्वादलाई जोड्दै आईरहेको छ ।
केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजका भाईस–प्रिन्सिपल श्याम सुन्दर श्रेष्ठसंग टेक्सास कलेज किन पढ्ने ? भन्ने विषयमा विशेष सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
श्याम सर यहालाई स्वागत छ
धन्यवाद छ सम्पुर्ण केटिएम खबर परिवारलाई ।
के कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
टेक्सास इन्टरनेशनल एजुकेशन नेटवर्क मण्टेश्वरीदेखी मास्टर्स डिग्रीसम्म शिक्षा दिदै आएको एउटा शैक्षिक संस्था भएको हुनाले हामीले भर्खरै प्लस टुको भर्ना सकाएका छौँ भने अहिले ब्याचलर डिग्री र मास्टर्स डिग्रीमा आठ वटा प्रोगाममा हामीले भर्ना खुलाएर अगाडी बढिरहेका छौँ ।
विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुग्नका लागि टेक्सासले के कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ?
हामी पक्कै पनि मिडियाको पहुँचबाट गइरहेका छौँ । हाम्रो स्टेक होल्डर भनेको हाम्रो गार्जेनहरु, हाम्रा विद्यार्थीहरु, त्यसैगरी हामीलाई माया गर्ने सुवेच्छुकहरु लगायतको पहुँचबाट विद्यार्थीहरुको पहुँचमा गइरहेका छौँ ।
टेक्सास कलेज कस्तो कलेज हो ?
हाम्रो अगाडी पशुपतीनाथ पनि हुनुहुन्छ सो गडब्लेसका कारण पनि धेरै सुवेच्छुक हुनुहुन्छ । टेक्सास अहिले कम्प्लिट एजुकेशन दिनका लागि अगाडी बढिरहेको शैक्षिक संस्था हो । जहा लामो समयदेखी विभिन्न युनिभर्सिटीहरुमा योगदान प्रदान गर्दै आउनु भएको सरहरुदेखी लिएर हामी जस्तो प्राइभेट क्षेत्रमा केही गरौ भन्ने योङ स्प्रिडका साथ लाग्ने साथीहरुको संस्था भएको हुनाले टेक्सासले छोटै समयमा पनि एकेडेमीक फिल्डमा केही योगदान पुर्याएको संस्था हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
टेक्सासले कुनै स्कुल अथवा कलेज एसियामा मात्र नभएर लगभग सरकारले प्राइभेट अर्गनाइजेसनको युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट ल्याउछ भने त्यही कन्सेप्टमा नै टेक्सास अब अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने सोचाइका साथ हामीले धेरै प्रोग्रामहरु लञ्च गरिरहेका छौँ । त्यही कारणले गर्दा टेक्सासको आफ्नो मार्केट छ ।
हाम्रो नारा पनि हो ‘फर कम्प्लिट हुमन विइङ’ । शिक्षा मात्र दिने कुरामा हाम्रो फोकस रहेन किनभने १० जनाको भ्याकेन्सी भयो भने त्यहा हजार जनाले एप्लाई गरेका हुन्छन् । हजार नै जनासंग सर्टिफिकेट पनि हुन्छ र क्वालिफिकेसन पनि हुन्छ । विद्यार्थीहरु गइसकेपछी मार्केटले खोजेको स्किल छ की छैन भन्ने कुरा मेजर रहन्छ र टेक्सासले त्यी कुराहरुलाई जहिले पनि टप प्रायोटी दिदै आएको छ । हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई प्राक्टिकल्ली त्यो खालको एक्पोजर दिने कुरालाई हामीले फोकस गर्दै गयौ । जसले गर्दा टेक्सासका विद्यार्थीहरु मार्केटमा स्ट्यान आउट हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
यत्ती बेला अन्य कलेजहरुले पनि व्याचलर, मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना लिइरहेका छन्, यो मानेमा अन्य कलेज भन्दा टेक्सास कलेज कस्तो कलेज हो ?
सबै कलेजहरुले मार्केटम हामी राम्रो छौँ भन्नु भएको छ । उहाँहरुको राम्रा कुराहरु पनि होलान् तर मलाई के लाग्छ भने विद्यार्थीहरुले कलेजका विषयम सर्वे गर्नुपर्छ । जाने वित्तकै भर्ना हुनुपर्छ भन्ने छैन । २१औँ शताब्दिमा त मार्केट कस्तो छ ?, कुनै पनि विषयको स्कोप के छ ? भनेर विद्यार्थीहरुले रिसर्च गर्नुपर्छ । इन्टरनेटको सुविधा छ, गुगल सर्च गर्न सक्यो । सबै कुरा सर्च गरि सके पछी सबै कुराहरु पाउछन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
टेक्सास कलेजमा एउटा विद्यार्थीले व्याचलर तथा मास्टर्स डिग्रीमा पढ्ने चाहना गर्यो भने उसको लागि के–के प्रावधान छ ?
हामीले न्युनतम फस्ट डिभिजनको कुरा गरिरहेका छौ मास्टर्स डिग्री र व्याचलरमा पनि । यसको अर्थ त्यो भन्दा कम प्रतिशत ल्याएको विद्यार्थीलाई अवसर दिदै–नदिने भन्ने कुरा नहुन सक्छ किनभने नेपालको शिक्षा अझ पनि वार्षिक आधारमा नै छ । ब्रिलियन्ट विद्यार्थी एक्जामको दिन विरामी पर्यो भने त्यो दिन उसको राम्रा मार्क नआउन सक्छ । त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो सेकेण्ड डिभिजनको विद्यार्थी छ भने हामी अभिभावक सहित उनीहरुसंग इन्टरभ्यु लिन्छौ र वास्तबमै उसंग स्किल छ भने हामी अवसर दिन्छौ ।
विद्यार्थीहरु लिदा हामी पहिला उनीहरुको इन्ट्रान्स लिन्छा, त्यसैगरी उनीहरुको इन्टरभ्यु सेसन हुन्छ । यसरी हामीले विद्यार्थीहरुको स्क्यानिङ गरेर विद्यार्थीहरुको भर्ना लिदै आएका छौँ ।
टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजका भाईस–प्रिन्सिपल श्याम सुन्दर श्रेष्ठसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः